03/24/13 ~ Myanmar Forward
မိတ္ထီလာမြို့သတင်းများ၊ ကောလဟာလများနှင့်ပတ်သတ်၍ ရှင်းလင်းချက်
Posted by drmyochit Sunday, March 24, 2013, under သတင်းများ | 1 comment
မိတ္ထီ လာ သတင်း နှင့်ပတ် သတ်၍ သိ လို သည် များ ကို ကျွန်တော့် message box ၊ တယ် လီဖုန်း များနှင့် ဆက် သွယ်ေ မးမြန်း လာ သည့် ကော လဟာ လ များနှင့် သတင်း များ ကို အမှား၊ အမှန် အ တည် ပြု ဖော်ပြ လိုက် ပါ တယ်။ ကျွန်တော် သိ လျှင် သိ သည့် အတိုင်း၊ မသိ လျှင် မသိ သည့် အတိုင်း ရိုးရိုး သား သား ဖော်ပြ လိုက် ပါ တယ်။
၁။ Q; မိတ္ထီလာ ရှိဖောင်တော်ထိပ် ရပ် တော်မှု ဆင်း တုကြီး တွေ အဖြို ခံရ တယ် ဆိုတာ ဟုတ် ပါ သလား။
A; လုံးဝ၊ လုံးဝ မ ဟုတ် ပါ။ ဆင်းတု နှစ်ဆူ၊ မှာ ဘက် စုံပြုပြင် ရန် အ တွက် လွန်ခဲ့သော တစ်လ
လောက် က တည်း ကမှ မြေ တူး ပြုပြင် နေတာ ဖြစ် ပါ တယ်။
၂။ Q; နာ ရီ စဉ် နား ရှိ ကမ္ဘောဇ ဘဏ် မီးလောင် သွား တယ် ဆို တာ ဟုတ် ပါ သလား။
A; လုံး ဝ မ ဟုတ် ပါ။ အစ တည်းက အသစ် ဆောက် လုပ် ရန် ပြုပြင် နေ တာ ပါ။
ကမ္ဘော ဇ ဘဏ် အ ပါ အဝင်၊ ရှိ ရှိ သမျှ ဘဏ် အား လုံး အန္တာ ရာယ် ကင်း ဘေး ရှင်း ပါ တယ်။
၃။ Q; ယင်း တော် မင်း ကျောင်း ဓါတ် တော် တိုက် ကြီး ကို ဖြို ချ ပစ် လိုက် တယ် ဆို တာ ဟုတ် သလား။
A; လုံးဝ၊ လုံး ဝ မ ဟုတ် ပါ။
၄။Q; သီ တဂူ ဆရာ တော်ကြီး မိတ္ထီ လာကို ကြွလာ တယ် ဆို တာ ဟုတ် လား။ ဘယ်မှ သ တင်း သုံးလဲ။
A; သီ တ ဂူ ဆရာ တော်ကြီး မိတ္ထီ လာကြွ လာတယ် ဆိုတာ မဟု တ် ပါ။ ဖြစ်စ ဉ် ရက် ပိုင်း အ တွင်း မှာ
သီ တ ဂူ ဆ ရာ တော်ကြီး ဟာ ချင်း ပြည် နယ် မှာ ရှိ နေ တယ်လို့ ဆရာ တော်ကြီး ကိုသင်္ကန်း ကိုယ် တိုင် ကိုယ် ကျ ကပ် လှူ ခဲ့ တဲ့ ချင်း ပြည် နယ်ရှိ မိတ်ဆွေ ဆ ရာ ဝန်မှ ၁၀၀% အတည်ပြု ပြော ကြားပါ တယ်။ ဆ ရာ တော် ကြီးက ဆုံးမ စကား မိန့်ကြား ခဲ့တယ်ဆိုတာ မှန် ကန် ပါတယ်။
၅။Q; ဦး ဝီ ရ သူ ကြွ လာ တယ် ဆိုတာ ဟုတ် သလား။
A; ဟုတ် ပါတ ယ် ။ဖြစ် ဖြစ်ခြင်း နောက် တစ် ရက် တန်းကြွ လာ တာ ပါ မြ စန္ဒာ သွပ်ပြား ဆိုင်ရှေ့
တန်း လျား လေးမှာ ထိုင်ေ န တာ ကို မျက်စိနှင့် တပ် အပ်မြင် လိုက် ပါတယ်။
၆။ Q; ကိုမင်း ကိုနိုင် တို့ ၈၈တွေ လာ သလား။
A ; ဟုတ်ကဲ့ လာတာ သေ ချာ ပါ တယ်။
၇။Q; ကျန်း မာရေး စာစောင် တွေမှာ ရေး သား နေတဲ့ဒေါက် တာမြင့်ဦး (ထွေကု- ထီလာ)
(ဒေါက်တာမြင့်ဦး Gpမဟုတ် ) အကြီး အကျယ် ထိခိုက် ဒဏ် ရာ ရ တယ် ဆိုတာ ဟုတ် သလား။
A; ကျွန်တော့် မျက် စိနှ င့်တပ် အပ် မမြင် ၍ ၁၀၀% အ တည် မပြုနို င် ပါ။ သို့သော် ဆေး ရုံရှိ အသိ
မိတ်ဆွေ များနှင့် ဆ ရာကြီးနှ င့်နီးစ ပ် ရာ လူ များ ၁၀ဦးနှ င့်အ ထက် ကိုမေးကြည့်ရာ ဟုတ် မှန်ကြောင်း ပြောကြား ကြ ပါသည်။ ဆ ရာကြီး ဦးမြင့်ဦးဟာ အစ္စလာမ် ဘာ သာ ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့်  ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ဝင် များ ကပါ ချစ်ခင် ကြည် ညို သော ဆရာ ဝန်ကြီးဖြစ် ပါတယ်။ ဆရာကြီး ထက် ဆရာ ဝန်စိတ် ဓါတ် ပို ရှိတဲ့ ဆရာ ဝန်ကို ရှာပြပါ ဒေါ် လာ တစ်သန်း ပေးပါ မယ် ဆို ရင်တောင် ကျွန်တော် တွေ့ အောင် မရှာနို င်ပါ။ မိတ္ထီ လာမြို့ တီဘီ တိုက်ဖျက်ရေး မှာတက် တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင် ရွက်နေ သလို သူ့ ဘ ဝ တစ်လျောက် လုံး လူ မျိုး ဘာ သာ မရွေး အသပြာ အဓိက မ ထား စေ တနာဖြင့် သာကုသပေး သဖြင့် အလွန် လည်း ဆင်း ရဲ ပါ တယ်။ ဒီ သ တင်း သာမှန် ခဲ့ရင်တော့ မိတ္ထီ လာမြို့ သူမြို့ သား များ အတွက် ကြီး မား တဲ့နစ် နာ မှုကြီး ပါဗျာ။
၈။Q;( အမျိုး သ မီး တစ် ဦးနှင့်အမျိုး သား တစ်ဦး သွေး အိုင် ထဲ တွင်လဲနေ သည့်ဓါတ်ပုံ ကိုဖော်ပြ ၍)
ဒီပုံတွေ က ကုလားတွေ ရိုက် သတ် ထား တဲ့ပုံလို့ facebook တစ် ခုမှာ တင် ထား လို့ဟုတ် ပါ သလား။
A; လုံး ဝ လုံး ဝမ ဟုတ် ပါဘူး။ ဒါ သတ် သတ် ယုတ် မာ တာ ပါ။ ဒီ ပုံတွေ ဟာ ယာဉ် စည်းကမ်း ထိန်း သိမ်း ရေးက ဆိုင်ကယ် အက် ဆီး ဒင့်ဖြစ် တဲ့ပုံတွေ ကို ပညာပေး ရိုက် ထား တဲ့ပိုစ တာ ကပါ။ မိတ္ထီ လာကန် ထိပ်က ပိုစတာ မှာ လာကြည့် နိင် ပါ တယ်။ ဒီပုံတွေကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်ပါ။ ကျွန်တော် လည်းဖျက် ပစ် လိုက်ပြီ။ ဒီလို ပုံတွေတွေ့ရင် ရမ်း သန်းပြီး like တို့ share တို့မ လုပ် ပါနဲ့။
၉။Q; နာ မည်ကြီး ပြည် တွင်း မီဒီ ယာ တစ် ခု (နာမည်ပြော ပါသည်) ကတင် ထား တဲ့လူ ၁၀ယောက်ေ လာက် ကို မီးရှို တား တဲ့ပုံက ကုလား တွေလား ဗမာ တွေလား။
A; ကုလား လား ဗ မာ လား သိ ချ င်ရင် တင် ထား တဲ့မီဒီ ယာ ကိုပဲ ဖုန်း ဆက်မေးကြည့် ပါခင်ဗျား။
ကျွန်တော့် အနေ နဲ့ဖြေ ဆိုရ န်တာ ဝန်မ ရှိပါ။
၁၀။Q;ဧရာဝတီသတင်းမှာတင်ထားတဲ့ ကလေးလေးတွေက စစ်ဖိနပ်ကိုကြည့်ပြီးကြောက်နေတဲ့ပုံ
A; ဒီ ပုံ ကို ကျွန်တော် လည်းကြည့် လိုက် ရပါ တယ်။ ပုံအောက် မှာတော့ပြန်လ ည်နေ ရာ ချ ထားပေးပုံ
လို့ရေး ထားပြီး ပုံကိုတော့ရည် ရွယ် ချက် ရှိ ရှိ၊ ယုတ် ယုတ် မာ တင် ထား တယ် ဆိုတာ ပေါ်လွင် ပါတယ်။ သူတို့ သာ ရိုး သား ရင် ကားနဲ့ သယ် သွား တဲ့ကား တစ်စီး လုးံပုံ ကိုဖော်ပြ ရမှာပေါ့။ အ ခုတော့ ကား ဘန်ပါ နောက်မှာ တက် ရပ်ပြီး ကာ ကွယ် မှုယူပေးနေ တဲ့ ရဲဘော်ခြေထောက် နဲ့ကြောက် နေ တဲ့ ကလေး မျက် နာ ကို ကွက်ပြီး ဖော်ပြ ထား တာ က ပြည် သူနဲ့ စစ်တပ် အကြား ရန်မီး ပွားအောင် သတ် သတ် ယုတ် မာ တာ လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီပုံကို မိတ္ထီ လာမြို့ သား တစ်ဦး အနေ နဲ့ကော ၊မြန်မာနိုင် ငံ သား တစ် ဦး အနေ နဲ့ပါ ပြင်း ထန် စွာ ကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချ ပါတယ်။ ဧရာဝ တီသ တင်း အနေ နဲ့ရိုးရိုး သား သား မှား တာ ဆို ရင် ပုံ အပြည့်အစုံ ကိုပြန် တင်ပေးပါ။
၁၁။Q;ခင်ဗျား က EPC အကြောင်း၊ စစ်တပ် အကြောင်း အကောင်း တယ်ပြော ပါ့လား ၊
ခင်ဗျား က စစ်တပ်ကလား EPCကလား။
A; မဟုတ်ပါ ဘူး ခင်ဗျား၊ကျွန်တော် သာမ က ကျွန်တော့ အမျိုး ထဲမှာတောင် EPC တို့စစ် တပ် ကတို့
မရှိပါ ဘူးဗျာ။ သူ တို့က တစ် ကယ် အလု ပ် လုပ်လို့ လုပ်တဲ့ အကြောင်း ရိုးရိုး သား သား တင်ပေး တာ ပါ။
၁၂။Q; NLD တွေ ဘာ လုပ် နေလဲ။
A; စဖြစ်ခါ စရက်တွေ မှာ သူတို့ ရုံး ထဲ မှာပဲ စုစု ရုံးရုံး လုပ်နေ ပါတယ်။ ကျွန်တော် က မည် သည့်
ပါတီဝ င်မှ မ ဟုတ် လို့ဘာတွေ တိုင်ပင်နေ သလဲဆို တာ မ သိ ပါ။၂၃/၂၄ ၊ရက်တွေ မှာတော့ ဝတ် စုံပြည့် ဝတ်ပြီးကားတွေ အလံတွေ နဲ့ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်ပေးနေ တာကိုတွေ့ပါ တယ်။
၁၃။Q; ပြည်ခို င်ဖြိုး ပါတီ ကရော ဘာတွေ လုပ်ပေးနေ သလဲ။
A; ကျွန်တော် မသိ ဘူးဗျ။
၁၄။Q; ဆရာ ကပြည် သူ့ခေတ် ဂျာနယ် မှာ ပါတဲ့ သုံးနာရီ နဲ့တာ့မ လုံလောက် ပါတို့၊ ပြည် တွင်းဖြစ် ဆန်ရှင် တို့ အ စ ရှိတဲ့ဆောင်းပါးတွေ ကို အပတ် စဉ်ရေး သားနေတဲ့စာေ ရးဆ ရာဟုတ်ပါသလားရှင့်။
A;ကျွန်တော်က ပြည်တွင်းဖြစ် ဆန်ရှင်၊ သုံးနာ ရီနဲ့တော့ မလုံလောက် ပါဆောင်းပါးတွေ ကိုရေးသား ခဲ့တဲ့ စာရေး သူ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကို ကျွန်တော် စာရေး ဆရာ လို့ဘယ် တုန်းကမှ မခံယူမိ ပါဘူး။ အပတ်စ ဉ်ေ ရး သားေ နတ ယ် ဆို တာ လည်း မဟုတ် ပါဘူး။ ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာ နယ်မှာ ဒီနှစ်ပု ဒ်ပဲ ပါဘူး တာ ပါ ခင်ဗျား။
၁၅။ Q; ခင်ဗျား က ကု လား လား။
A;မဟုတ် ပါ ဘူး ခင်ဗျား ၊ကျွန်တော် က ဗုဒ္ဓ ဘာသာ၊ ဗမာလူ မျိုး စစ် စစ်ပါ ။
ဒါပေ မယ့် ဗုဒ္ဓ အလို ကျ၊ ဗုဒ္ဓ အ ဆုံး မအ တိုင်း ၊ဗုဒ္ဓချီး မွမ်း မယ့် ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်အောင် ကြိုး စားနေ သူပါ ခင် ဗျား။
Face book ပေါ်ရှိသူ ငယ်ချင်း၊ မိ ဘ ပြည် သူများ ခင်ဗျား ၊ အခု ကျွန်တော့် ရဲ့ Account ကို Hack မယ်
Report လုပ် မယ် စသ ည့်ဖြင့်ချိမ်းခြောက် နေသော သူများရှိ ပါသဖြင့် friend add အများ အပြားကို
လက်မ ခံ ရဲ တာခွင့်လွှတ် ပါခင်ဗျား။ ဒါအပြင် အကယ်၍သူ တို့ပြောသလို Hack ပြီး လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးသွေးခွဲ လုံဆော် သည့်စာ များ ပုံများ တင်ပါက ကျွန်တော် လုံး ဝမဟုတ် ပါဟု ကြိုတင် အစီရင်ခံ အပ်ပါ သည် ခင်ဗျား။ ကျွန်တော် က ငြိမ်းချမ်း ရေးကို သာ လိုလားသူ ပါ ခင် ဗျား။
From: Min Thant Aung
Posted by drmyochit Sunday, March 24, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ခုလို မျိုး လူအ များ ဆဲ ချင် စ ရာ လေး တွေမှ မလုပ် လိုက်ရ ရင် ကိုမိုး သီးတို့ ရိုးရာ အစဉ် အလာ တွေ ပျက် ကုန် မှာေ ပါ့။ ခု လည်း အဆဲ မခံရ တာကြာ တော့ ပျင်း တယ်နဲ့ တူတယ်။ လုပ်ပြန် ပြီ။ ဒီတစ် ခါ လုပ် တာတော့ တော်ေ တာ် ဆိုး တယ်။
ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ၉၆၉ အထိမ်း အမှတ်ကို နာဇီ တံဆိပ် နဲ့ နှိုင်း ယှဉ်ပြီး စော်ကား ထား ပါ တယ်။ အဲဒါ ထက် ပိုဆိုး တာက ကိုမိုးသီး လို အမေရိ ကန်က အစိုးရ အဖွဲ့ ၀င်တွေ၊ လွှတ်တော် အမတ် တွေ၊ နိ်ုင်ငံရေး သမား တွေနဲ့ အဆက် အ သွယ် ရှိ သူ က သူ့ facebook မှာ ခုလို ဗုဒ္ဓ ဘာသာ တွေကို အကြမ်း ဖက် သမား မကောင်း ဆိုး ၀ါးလို့ မြင်စေ နိုင် တဲ့ ပုံနဲ့ အ တူ Many Business shops have been forced by Myanmar Buddhist extremists to posta969 sign in Burma ဆိုပြီး ရေး ထားတော့ မတရား ရန်စ ခံရတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ တွေကို ကမ္ဘာ့ အလယ် မှာ ပိုပြီး နာမည် ပျက်အောင် ကို မိုးသီး လုပ်နေ တာနဲ့ အတူတူပဲ။ ကိုယ့် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ တွေ ဘက် က မရပ် တည် ရင်နေ ပါ။ ခု လို ဘာသာခြား ဘက် ကနေ ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ ကို နာ မည် ပျက်အောင် အောက် တန်း ကျစွာ လုပ် တာ ဟာ ကိုယ်မွေး တဲ့ နိုင်ငံ က မြန်မာ တွေကို စော် ကား ရာ ကျ ပါ တယ်။ ကိုယ့် နိုင် ငံ ကို ကမ္ဘာ့ အ လည်မှာ နာမ ည် ပျက်အောင် ကျေး ဇူး ကန်း ရာ ကျ ပါ တယ်။
ကို မိုးသီး မြန်မာပြည် ကို နိုင်ငံရေး ဖျာခင်း ဖို့ ဆိုပြီး မြန် မာပြည် ပြန် လာတော့ မှန်း ချက်နဲ့ နှမ်း ထွက် မကိုက် ခဲ့ ဘူး။ နိုင်ငံရေး အပြောင်း အလဲ တွေဖြစ် တော့ အမေ ရိ ကန်မှာ ဖိနပ် နဲ့ပေါက် ခဲ့တဲ့ သမ္မတ ကို ခြေသ လုံးဖ က်ဖို့ မြန် မာပြည် ပြန်ပြေး လာပေ မဲ့ သမ္မ တကြီး က အတွေ့ မခံ ခဲ့ဘူး။ အမေစု ကလည်း အတွေ့မ ခံဘူး။ ဒီမို ကရေစီ သူရဲေ ကာင်းကြီး လို ပြည် သူက ကြို ဆို မှာ ကို မျှော် မှန်း ထားပေ မဲ့ တကယ် ရ လိုက် တာ က ပြည် သူ လူ ထု ရဲ့ ကဲ့ ရဲ့ ရှုံ့ ချ သံတွေ ဆဲ ဆိုပြစ် တင် သံတွေ။ ဒါ တွေကြောင့် ကို မိုးသီး မြန်မာပြည် ကို စိတ်နာ သွားပြီး မြန် မာပြည် နဲ့ မြန် မာ လူ မျိုးတွေ ကိုး ကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓဘာ သာ ကို အငြိုး နဲ့ နာမည် ပျက်အောင် လုပ်နေ တာ လား?
ကြုံလို့ ကို မိုးသီး မြန် မာပြည် လာ တုန်းက ဘင်္ဂါ လီိ အရေးပြော ခဲ့တာ ကို အ ခုရေး မယ်။ အဲဒီ တုန်းက ကိုမိုး သီး က ဘင်္ဂါ လီတွေ ရခိုင် မှာနေတာ ဘာဖြစ်လဲ မြန် မာတွေ လည်း ထိုင်းမှာ သန်း နဲ့ချီပြီးနေ တာပဲ လို့ ပြော ခဲ့တယ် ။ ကိုမိုး သီး နိုင်ငံရေး သမား လုပ်ပြီး စဉ်း စား ချင့် ချိန် နိုင် စွမ်း တအား နည်း တာ ကို ပြ တာ။ မြန် မာတွေ ထိုင်းမှာ သန်းနဲ့ ချီနေနေတာ ဘယ်သူမှ အပြီး မနေ ကြဘူး။ အချိန် တန် အိမ်ပြန် မဲ့သူတွေ ကြီးပဲ။ ကိုယ့် နိုင်ငံမှာ စီး ပွားရေး အဆင် မပြေ လို့ ခဏ သွား နေ ကြ တာ။ ဘယ် သူမှ ထိုင်း နိုင်ငံ ရဲ့ တိုင်း ရင်း သား ပါ ဆိုပြီး မလိမ်ကြ ဘူး။ နိုင်ငံ သားဖြစ်ခွင့် တိုင်း ရင်း သား ဖြစ်ခွင့် ဘာ အ ခွင့် အရေး မှ မတောင်း ဆိုဘူး။ ထိုင်းဒေ သ ခံတွေ ကို ဒုက္ခ မပေး ဘူး။ ထိုင်း နိုင်ငံ သားတွေ မလုပ် ချင်တဲ့ အလုပ် တွေကို သူ့ နိုင်ငံ သားတွေ မလုပ် တဲ့ဈေး ပေါ ပေါနဲ့ အလုပ် လုပ် နေကြ တာ။ ဘင်္ဂါ လီ တွေကို သမိုင်း မ လိမ် ဘူး။ နယ်မြေ မတောင်း ဘူး။ ဒေသ ခံကို မုဒိမ်း မကျင့် ဘူး။ အိမ် မီး မ ရှို့ ဘူး။
ခင် ဗျား လို အမေ ရိ ကန် လို နိုင်ငံမှာ တရား ၀င် အေး ဆေး နေ ခွင့် ရှိ ထား သူ တောင် မြန် မာပြည် ကို အခွင့် အရေး ရရင် ပြန်လာ နေ ချင် တာ မြန်မာ့ စိတ် ဓာတ်ကို ခင်ဗျား သိသင့် တာပေါ့။ ဒါကို ရခိုင် ပြည် နယ် က ကျူး ကျော် ဘင်္ဂါလီနဲ့ ထိုင်း မှာ ရောက် နေတဲ့ မြန် မာ တွေ ကို နှိုင်း ယှဉ် တာ ခင် ဗျား တော်တော် ရှော် တာပဲ။
ကိုယ့် တိုင်း ပြည်နဲ့ လူ မျိုး ကို မကူ ညီရင် နေပါ။ မြန် မာပြည် မှာ နေ ရာမ ရ တာနဲ့ မကောင်း တဲ့ စိတ်နဲ့ စား ခွက် ကို သေး ပန်းပြီး ကျေး ဇူး ကန်း တာ မျိုးတော့ မလုပ်စေ ချင်ဘူး။ မြန်မာ ပြည် ကို ကျေးဇူး မပြု ရင်နေ ပါ။ ဖင် လှန် မပြ ပါနဲ့ ကို မိုးသီး။
ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်း ရေး မှူး ချုပ်၏ အထူး ကိုယ် စား လှယ် မစ္စတာ ဗီဂျေ နမ် ဘီးယား မိတ္ထီလာမြို့၌ ဖွင့် လှစ် ထားသည့် ကယ် ဆယ်ရေး စခန်း များကို လှည့် လည် ကြည့်ရှု
Posted by drmyochit Sunday, March 24, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိ နေသော ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူး ချုပ်၏ အထူး ကိုယ် စား လှယ် မစ္စ တာ ဗီဂျေ နမ်ဘီး ယားသည် သမ္မ တ ရုံး ဝန် ကြီး ဌာန ပြည် ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ၊ ဆရာ တော် ဓမ္မ ဒူတ ဒေါက်တာ အရှင် ဆေကိန္ဒ နှင့် တာ ဝန် ရှိ သူ များ လိုက် ပါ လျက် ယနေ့ နံနက် (၈) နာရီ (၁၅) မိနစ် တွင် မန္တ လေးတိုင်း ဒေ သကြီး မိတ္ထီ လာမြို့ မိတ္ထီ လာ လေ တပ် စခန်း ဌာန ချုပ် သို့ XY လေ ယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိ လာရာ မန္တ လေးတိုင်း ဒေ သကြီး ဝန်ကြီး ချုပ် ဦးရဲမြင့်၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးနှင့် ဒုတိယ ဝန်ကြီးများ ကကြို ဆိုကြ သည်။
ထို့ နောက် ကုလ သမဂ္ဂ အ ထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူး ချုပ်၏ အထူး ကိုယ် စားလှယ် မစ္စ တာ ဗီဂျေ နမ် ဘီး ယား သည် မန္တလေး တိုင်းဒေ သကြီး ဝန်ကြီး ချုပ်၊ ပြည်ထောင် စု ဝန်ကြီးများ၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန မှ ဒုတိ ယ ဗိုလ် ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီး များနှင့် ဆ ရာတော် ကြီး များနှင့် အတူ မိတ္ထီလာမြို့ ခရိုင် အားကစား ကွင်း၌ ယာယီ ဖွင့် ထားသော ကယ် ဆယ်ရေး စခန်းသို့ ရောက် ရှိကြ ရာ ကယ်ဆယ် ရေး စခန်း၌ ကြို တင် ရောက်ရှိ နေသော အစ္စ လာမ် ဘာသာ ရေး အဖွဲ့ ကြီးမှ ပုဂ္ဂုလ် များက ရင်းရင်း နှီးနှီး နှုတ်ဆက် ကြသည်။
ယင်းနောက် အထူး ကိုယ် စားလှယ် သည် ဒုက္ခ သည် များ အား သိရှိ လို သည် များကို မေးမြန်းပြီး အားပေး စကား ပြောကြားသည်။
ဆက် လက်၍ အထူး ကိုယ် စား လှယ် နှင့် အဖွဲ့ ဝင်များ သည် မိတ္ထီ လာမြို့ အမှတ် (၁) အခြေခံ ပညာ အထက် တန်း ကျောင်း၌ ယာယီ ဖွင့်လှစ် ထားသည့် ကယ် ဆယ်ရေး စခန်း သို့ ရောက် ရှိကြပြီး ဒုက္ခ သည် များအား ဆရာဝန်၊ ဆရာ မများက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် ပေးနေမှု ကို ကြည့် ရှုပြီး ဒုက္ခ သည် များအား နေထိုင် စားသောက်မှု အခြေ အနေ များကို မေးမြန်း၍ အာပေး စကားပြော ကြားသည်။
ထို့ နောက် အထူး ကိုယ် စား လှယ်နှင့် အဖွဲ့ ဝင် များ သည် မိတ္ထီ လာမြို့ ပညာရေး ကောလိပ် လေ့ ကျင့်ရေး အလယ် တန်း ကျောင်း၌ ယာယီ ဖွင့်လှစ် ထားသည့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း သို့ ရောက် ရှိကြပြီး ဒုက္ခ သည် များအား ရင်းရင်း နှီးနှီး နှုတ် ဆက်၍ နေထိုင် စားသောက် မှု အခြေ အနေ များကို မေးမြန်း သည်။
ယင်း နောက် ကိုယ်စား လှယ်နှင့် အဖွဲ့ ဝင်များသည် မိတ္ထီ လာမြို့၌ ဖြစ် ပွား ခဲ့သည့် ဆူပူ အကြမ်း ဖက်မှု ဖြစ်စဉ် ကြောင့် မီးလောင် ပျက်စီး သွားသော နေအိမ် အဆောက် အအုံ များအား ကြည့် ရှု ကြ သည်။
ဆက်လက် ၍ အထူး ကိုယ် စား လှယ်နှင့် အဖွဲ့ ဝင် များသည် မိတ္ထီ လာမြို့ သာသ နဝေပုလ် လ ကျောင်း တိုက် ၌ ယာယီ ဖွင့်လှစ် ထားသည့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းသို့ ရောက် ရှိကြပြီး ဒုက္ခ သည်များ အား မေးမြန်း ၍ အားပေး စကား ပြော ကြားသည်။
ထို့ ပြင် အထူး ကိုယ် စား လှယ်သည် သာသန ဝေပုလ်လ ကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော် များအား ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ် အတွင်း အခြေ အနေ များ ပြန်လည် တည်ငြိမ် မှု ရှိအောင် ဝိုင်းဝန်း ကူညီ ဆောင် ရွက်ပေး ခဲ့မှုနှင့် ဒုက္ခ သည် များအား ကယ်ဆယ် ရေး စခန်း များသို့ ကူညီ ပို့ ဆောင်ပေး ခဲ့မှု တို့ ပေါ် ကျေး ဇူးတင် ပါကြောင်းဖြင့် လျှောက်ထား ပြော ကြား ခဲ့သည်။
From: http://goo.gl/3ui8M (ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန)
ပြည် ထောင် စု ငြိမ်းချမ်း ရေး ဖော် ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ကော် မ တီ ဒုတိယ ဥက္က ဌနှ င့် သမ္မ တရုံး ဝန် ကြီှးှ ဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင် မင်း က မိတ္ထီ လာမြို့တွင် ဖြစ် ပွား ခဲ့သော အကြမ်း ဖက် မှု များ ကြောင့် မီးလောင် ဆုံးရှုံး ခဲ့သော လူနေ အိမ် များကို ပြန် လည်ဆောက် လုပ်ပေး သွား မည် ဟု ယနေ့ မ နက် တွင် မိတ္ထီ လာမြို့ ခရိုင် အား က စား ကွင်းရှိ ကယ် ဆယ်ရေး စခန်း သို့ရောက် ရှိ စဉ် မီဒီယာ များ သို့ ပြော ကြား သည်။
“အဓိ က ကတော့ နဂို အနေ အထား အမှန် ရောက်အောင် ပြန် လုပ်မယ်၊ နဂို အနေ အထား အမှန် ဆို တာ က နဂို တုန်းက ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း နဲ့ နေကြ ထိုင်ကြ စားကြ သောက်ကြ လုပ်ကြ ကိုင်ကြ။ အဲပုံစံ
အတိုင်း ဖြစ်အောင် ပြန် လုပ် ပေးမှာ၊ မီးလောင် သွားတဲ့ အိမ်တွေ ကိုလည်း ပြန်ဆောက်ပေးရမှာပေါ့” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသောကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ချုပ်၏ အထူး ကိုယ် စား လှယ် မစ္စတာ ဗီဂျေနမ် ဘီးယား၊ ဓမ္မဒူတ ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင် ဆေကိန္ဒ တို့နှင့် အတူ မိတ္ထီ လာမြို့သို့ ယနေ့ မနက် တွင်ရောက် ရှိ သွားခြင်းဖြစ်ပြီး မန္တ လေး တိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီး ချုပ် ဦး ရဲမြင့်၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ ဒုတိယဗိုလ် ချုပ်ကြီး မြင့်စိုး တို့နှင့် အတူ မိတ္ထီလာမြို့ ခရိုင် အားက စားကွင်း၊ အမှတ်(၁) အခြေခံ ပညာ အထက် တန်းကျောင်းနှင့် သာ သနဝေ ပုလ္လ ကျောင်းတိုက်ရှိ ယာယီ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း များမှ ဒုက္ခသည် များအား သွားရောက်တွေ့ ဆုံ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မိတ္ထီ လာမြို့ တွင် မတ်လ (၂ဝ) ရက်နေ့နှင့် (၂၁) ရက်နေ့ တို့ တွင်ဖြစ် ပွားခဲ့ သည့် ပဋိပ က္ခဖြစ် စဉ်ကြောင့် သေ ဆုံး သူ (၃၂) ဦး ရှိ ခဲ့ပြီး အကြမ်း ဖက် ဖျက်ဆီး မှုနှင့် မီးလောင် မှုများကြောင့် ဒုက္ခ သည်
စုစုပေါင်း (၉၆ဝဝ)ကျော်ကို ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင်နေရာချထားလျက် ရှိကြောင်း ပြန် ကြား ရေး ၀န်ကြီး ဌာနမှ မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့ ည (၈)နာရီ သတင်း တွင် ဖော်ပြ ခဲ့သည်။
မိတ္ထီ လာမြို့ လယ်ဝေး မြို့နယ် ရုံးပင် ကျေး ရွာ ရမည်း သင်း မြို့နယ် ရွာတန်း ကျေး ရွာနှင့် ရွှေဒါး သာစည် ကျေးရွာ တို့၌ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ဆူပူ အကြမ်း ဖက် မီး ရှု့ ဖျက် ဆီး မှု များ တွင် ပါ ဝင် ခဲ့ သည် ဟု ယူ ဆရ သူ အချို့ အား ဖော်ထုတ် ဖမ်း ဆီး အရေး ယူထား ကြောင်း ပြန် ကြား ရေး ၀န် ကြီး ဌာနမှ သတင်း ထုတ်ပြန်
Posted by drmyochit Sunday, March 24, 2013, under ကြေငြာချက် | No comments
မတ္ထီ လာမြို့ လယ်ဝေး မြို့ နယ် ရုံးပင် ကျေး ရွာ၊ ရမည်း သင်းမြို့ နယ် ရွာတန်း ကျေး ရွာ နှင့် ရွှေ ဒါး သာ စည် ကျေး ရွာ တို့ ၌ ဖြစ် ပွား ခဲ့သည့် ဆူပူ အကြမ်း ဖက်မှု များတွင် ပါဝင် ခဲ့သည် ဟု ယူ ဆ ရသူ အချို့ အား မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ တပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်း ထား ရှိကြောင်း သိရှိ ရသည်။
မိတ္ထီ လာမြို့ ၌ ဖြစ် ပွားခဲ့ သည့် ဆူ ပူအကြမ်း ဖက် မီးရှို့ ဖျက်ဆီး မှု တွင် ပါဝင် ခဲ့ သည် ဟု ယူ ဆ ရသူ သန်းဝင်း (၁၈)နှစ်၊ သန်းထွန်းအောင် (၃၀)နှစ်၊ သန်းထိုက်စိုး (၃၈)နှစ်၊ ကျော် စွာ လှိုင် (၃၂)နှစ်၊ အောင်မျိုး (၂၅) နှစ်၊ ညီညီ ကျော် (၂၇)နှစ် ၊ မောင်ညို (၅၀)နှစ်၊ အောင်နိုင်ဝင်း (၁၈) နှစ်၊ စိုး သူအောင် (၁၈)နှစ်၊ တင်အောင် (၃၂)နှစ် ၊ ဝင်းဇော် (၃၆)နှစ်၊ လှထွန်းမြင့်(၂၉)နှစ်၊ စံလင်း (၂၀)နှစ်တို့ (၁၃) ဦးအား မိတ္ထီ လာ မြို့နယ် မြို့မ ရဲစ ခန်း ၌ မတ် (၂၂) ရက် မွန်း လွဲ ပိုင်း တွင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ထားကြောင်း၊ တုတ်၊ ဒါးလက်နက် ကိုင်ဆောင် လာခဲ့ သူ အခြား (၅၂) ဦးအား ခံဝန် ချက်ဖြင့် ပြန်လွှတ် ပေးခဲ့ ကြောင်း သိ ရသည်။
ထို့ အတူ လယ် ဝေးမြို့ နယ် ရုံးပင် ရွာ၌ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည် ဆူပူ အကြမ်း ဖက် မီးရှု့ ဖျက် ဆီးမှု တွင် ပါဝင် ခဲ့ သည် ဟု ယူဆ ရသူ ဝင်းလှိုင် (၄၉)နှစ်၊ အောင် ဆန်းဦး (၄၈)နှစ်၊ လှိုင်း ဝင်း(၄၆)နှစ်၊ ကျော်စိုး (၃၅)နှစ်၊ တင် ယုလိ
ထို့ အတူ လယ်ဝေး မြို့ နယ် ရုံးပင် ရွာ၌ ဖြစ် ပွား ခဲ့သည့် ဆူပူ အကြမ်း ဖက် မီး ရှို့ ဖျက် ဆီး မှုတွင် ပါဝင် ခဲ့သည် ဟု ယူဆ ရသူ ဝင်းလှိုင် (၄၉)နှစ်၊ အောင်ဆန်းဦး (၄၈)နှစ်၊ လှိုင်းဝင်း(၄၆)နှစ်၊ ကျော်စိုး (၃၅)နှစ်၊ တင်ယုလှိုင် (၃၅) နှစ်တို့ (၅) ဦးအား မတ်(၂၃) ရက် နံနက် ပိုင်းတွင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ထားကြောင်း သိ ရသည်။ အဆို ပါ ဖြစ်စဉ် တွင် ပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့ သည်ဟု သတင်း ရရှိသည့် အောင်နိုင်ဆွေ၊ အေးလွင်၊ စိုးလွင်၊ အောင်လှိုင်၊ ကိုရဲ၊ မောင်ထွေး၊ ကိုပြုံး၊ နိုင်စိုးအောင်၊ အောင်နိုင်နှင့် သန်းထွန်းတို့ (၁၀)ဦးအား ဖမ်းဆီး ရမိရေး ဆောင် ရွက် လျက် ရှိ ကြောင်း သိရ သည်။
အလား တူ ရမည်း သင်းမြို့ နယ် ရွာတန်း ကျေး ရွာနှင့် ရွှေဒါး သာစည် ကျေး ရွာ တို့ ၌ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ဆူပူ အကြမ်း ဖက် မီးရှို့ ဖျက်ဆီး မှုတွင် ပါဝင် ခဲ့သည် ဟု ယူ ဆ ရ သူ နိုင်သူ (၂၂) နှစ်၊ အောင် မျိုး လွင် (၂၂) နှစ်၊ မှိုင်းကြီး (၂၂) နှစ် ၊ ဖိုးဇော် (၃၅) နှစ် ၊ ဝင်းမိုး (၂၅) နှစ်၊ အောင်နန်း တင် (၂၃)နှစ် ၊ မိုးကောင်း (၂၃) နှစ်၊ မြင့်သိန်း (၄၀) နှစ်၊ နိုင်လင်း (၁၈)နှစ်၊ မျိုး မြင့်အောင် (၂၉)နှစ်၊ ဘိုရှိုင်း (၁၅)နှစ်၊ လှဦး (၄၀)နှစ်၊ တင်အောင် (၄၅)နှစ် ၊ မျိုး ဇော် ထွန်း (၂၁) ၊ ဇေယျာ မောင်မောင် (၁၈) နှစ်၊ သန်းဇော်(၃၉)နှစ်၊ နန်းမျိုး အောင်(၁၈) နှစ် တို့ (၁၇) ဦး အား မတ်လ (၂၄) ရက် နံနက် (၂) နာရီ ခွဲတွင် ရမည်းသင်း ရဲစ ခန်း၌ ဖမ်း ဆီး ထိန်း သိမ်း ထား ကြောင်း သိ ရသည်။
တရား ဥပဒေ စိုးမိုး ရေးအ တွက် အ ဆိုပါ ထိန်းသိမ်း ထား သူ များ အား ဥပဒေနှင့် အညီ အရေး ယူ ဆောင်ရွက် သွား မည် ဖြစ် ကြောင်း ပြည် ထဲရေး ဝန်ကြီး ဌာန မှ သတင်း ရရှိ သည်။
KIA တပ်မဟာ ဒေသတွေမှာ တိုက်ပွဲ လေးကြိမ်လောက်ဖြစ်
Posted by drmyochit Sunday, March 24, 2013, under သတင်းများ | No comments
တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေတဲ့ ကချင်ဒေသက တနေရာ
ကချင် ပြည်နယ် မှာ ကေ အိုင်အေ တပ်တွေနဲ့ အစိုးရ တပ်တွေ ကြား တိုက်ပွဲတွေ ကြိုကြား ကိုကြား ဖြစ်နေ ရာမှာ အထူး သဖြင့် ရှမ်းပြည် နယ် မြောက် ပိုင်း ကေ အိုင်အေ တပ်မဟာ ၄ အတွင်း က နယ် တွေနဲ့ ရွှေ ကူမြို့ နယ် အတွင်းက တပ်မ ဟာ ၂ တပ်ရင် ၅ နယ်မြေ တွေ အတွင်း မှာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မ ဟာ ဒေသ တွေမှာ တိုက်ပွဲ လေး ကြိမ်လောက် ဖြစ်ခဲ့ တာလို့ ကေအိုင်အေ ပြောခွင့်ရသူ ဦလာနန်က ခန့် မှန်း ခဲ့ပြီး တချို့ မှာ အစိုးရ စစ်တပ်နဲ့ ကေအိုင်အေ တပ် တွေ ကြား ထိတွေ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ သလို တခြား နေရာ တွေ မှာတော့ ကေ အိုင်အေနဲ့ ပလောင် ပူးတွဲ တပ် တွေနဲ့ အစိုးရ တပ်တွေ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ တာလို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ တိုက်ပွဲတွေမှာ ကေအိုင်အေ ဖက်က အထိ အခိုက် မရှိ ခဲ့ပေ မယ့် အစိုးရ တပ်တွေ ဖက်က ထိခိုက် ကျဆုံးမှု ကို သူ့ အနေနဲ့ မှန်း ရ ခက်ကြောင်း ဦးလာ နန်က ဆိုပါတယ်။
စစ်ရေး လျော့ဖို့ ပြောထား ပေမယ့် အခုလို တိုက်ပွဲ တွေ ထပ်ဖြစ်ခဲ့ တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်း ရာ မှာတော့ ခု လောလော ဆယ်မှာ ကေအိုင်အေ တပ်ရှိရာ နေရာ ကို အစိုးရ တပ်တွေက ချဉ်းကပ် လာ တာ ဖြစ်ပြီး ကေ အိုင်အေ တပ် မဟာ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၅ မှာ အစိုးရက စစ်တပ် အလုံး အရင်းနဲ့ လမ်းဖောက်တာတွေ လုပ် လာတာ ဖြစ်တယ် ၊ စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ ဗျူဟာ လမ်းဖောက်တာ ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေး ပွဲမှာ ကတိ ပေးခဲ့ ပေမယ့် ဒါကို လျစ် လျူရှု ပြီး ချဉ်းကပ် လာလို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ် ရတာလို့ ဦးလာ နန်က ရှင်းပြ ခဲ့ပါတယ်။
အခုလို တိုက်ပွဲ တွေ ဖြစ် ခဲ့ပေမယ့် လာမယ့် ဧပြီလမှာ ကျင်းပမယ့် တွေ့ ဆုံ ဆွေး နွေးပွဲ အစီ အစဉ် တွေ အပေါ် ပျက်ပြား သွားစေ မှာ မဟုတ်ဘူး လို့ ပြော ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
မိတ္ထီလာနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေမှုကိုကြိုဆိုထောက်ခံပါကြောင်း အထူးသံတမန် မစ္စတာ နမ်ဗီးယား ပြော
မိတ္ထီလာ မြို့သို့ရောက် ရှိ နေသော ကုလ သမဂ္ဂ ၏ မြန် မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး သံ တမန် မစ္စတာ နမ် ဗီး ယား သည် တပ် မတော်နှင့် ရဲ တပ်ဖွဲ့ များ၏ကိုင် တွယ်ဆောင် ရွက်နေမှု ကို ကြိုဆိုထောက်ခံပါကြောင်း ပြောသည်။
"ရဲ တပ် ဖွဲ့ များရဲ့ ကိုင် တွယ် ဆောင်ရွက် နေမှု ကို အပြစ် မတင် ပါဘူး။ ဘာဖြစ် လို့ လဲ ဆိုတော့ ဘယ် လို ပဋိပ က္ခ မျိုးမ ဆို ရဲ တပ် ဖွဲ့ တွေ အပြော လွတ်မှာ မဟုတ် ဘူး"ဟု မိတ္ထီလာ အဖြစ် အပျက် အတွက် ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သော ရဲ တပ်ဖွဲ့ အပေါ် သုံး သပ်ပြော ကြားသည်။
အရေးပေါ် အခြေအနေ၁၄၄ ထုတ်လိုက်လို့ မိတ္ထီလာ ကအခြေအနေပိုဆိုးသွားတာလို့ထင်တယ်ဗျ. ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကပ စ်ခွင့် မရ သေးတော့ လူစု လူဝေး တွေက ပိုဆိုး လာတယ် .ရဲ တပ် ဖွဲ့က စောင့် ပဲကြည့် နေရ တာကိုး ဒီတော့ ပို ဆိုး လာတယ် ဟု မြိုခံ တစ်ဦး ကပြော သည်။
ကျော်ရဲလင်း မိတ္ထီလာမှ သတင်းပေးပို့သည်။
News From: Popular Myanmar News Journal
Posted by drmyochit Sunday, March 24, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ရုရှားသူဌေးကြီး Boris Berezovsky (မတ်လ ၆ ရက်၊ ၁၉၉၉)။
စနေနေ့ ကသေ ဆုံး သွား တဲ့ ပြည်ပ အခြေ စိုက် ရုရှား သူဌေး ကြီး လည်းဖြစ်၊ ရုရှား အစိုး ရကို ဝေ ဖန်ပြော ဆိုနေ သူ လည်းဖြစ် တဲ့ Boris Berezovsky သေဆုံး သွား တဲ့ဖြစ် ရပ်ကို စုံစမ်း စစ်ဆေး မှုတွေ လုပ်ဆောင် နေတယ် လို့ ဗြိ တိသျှ ရဲ တပ် ဖွဲ့က ပြော လိုက် ပါတယ်။
လန်ဒန် မြို့ရဲ့ အနောက် ဘက် လန်ဒန်နဲ့ ၁၀ မိုင်လောက် ဝေးတဲ့ Ascot မြို့က အိမ် တအိမ်မှာ အသက် ၆၇ နှစ် အရွယ် မစ္စ တာ Berezovsky သေဆုံး နေတာ တွေ့ ရ တာ ဖြစ် ပါတယ်။
သူ သေဆုံး သွားပုံက အကြောင်း ပြချက် ရှာ မတွေ့ ဘူးလို့ ရဲ ကပြော ပြီးတော့ စုံစမ်း စစ်ဆေး မှုတွေ လုပ်ဆောင် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေ ညာ ချက် ထုတ်ပြန် ပါတယ်။ မစ္စတာ Berezovsky ဟာ ရုရှား သမ္မတ Vladimir Putin နဲ့ မပြေ မလည် ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ် က တည်းက ဗြိတိန် နိုင်ငံမှာ အခြေချ နေထိုင် နေတာ ဖြစ် ပါ တယ်။
သူဟာ မသမာ မှုတွေ ကျူးလွန် ထား တယ် လို့ ပြောပြီးတော့ သူ့ကို နိုင်ငံ ကိုပြန် ပို့ဖို့ ရုရှားက တောင်းဆို ထားပေ မဲ့ ဗြိတိ သျှ အစိုး ရက ဒါကို ငြင်း ဆိုပြီး သူ့ကို နိုင်ငံ ရေး ခို လုံခွင့် ပေး ခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။
News From: VOA
တောင် ကုတ်မြို့တွင် ရခိုင် အရေး အခင်း လွန် နောက်ပိုင်း အစိုး ရ၏ ဒုက္ခသည်များ ပြန် လည် နေရာ ချ ထားခြင်း အစီ အစဉ် များ အပေါ် မကျေ နပ်၍ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ မနက် ပိုင်းက လူ ၃၀၀ ခန့်က လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြ ရာ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြ၍ ဦးဆောင် ပါဝင်သူ သုံးဦး အား ဒေသ ဆိုင်ရာ အာဏာ ပိုင်တို့က အရေး ယူ ထားကြောင်း တောင် ကုတ်မြို့ ရခိုင် လူမှု ကွန် ယက် တာဝန် ရှိ သူများ က ပြောသည်။
ဒုက္ခ သည်များ ပြန် လည်နေ ရာ ချ ထားရေး တွင် နိုင်ငံ သား စိစစ်ခြင်း မရှိဘဲ လုံးခြင်း အိမ်များ ချပေး မည့် အပေါ် တောင် ကုတ်မြို့ ရှိ ရခိုင် လူမှု ကွန် ယက် ဦးဆောင်၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ က ဆန္ဒပြကြစဉ်။
(ဓာတ်ပုံ - သိန်းလှိုင်၊ မဇ္ဈိမ)
မနက် ၉း၄၀ နာရီမှ ၁၀း၁၅ နာရီထိ တောင် ကုတ်မြို့ လမ်း များပေါ် တွင် စီတန်း လှည့်လည် ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြခြင်း
“ယာယီ ဒုက္ခ သည် စခန်းက လူတွေကို အိမ်တွေ ဆောက် လုပ်နေ ရာ ချထား ပေး မယ် ဆိုရင် ပထမဆုံး သူတို့တွေ ကိုနိုင်ငံသား ဟုတ်မဟုတ် စီစစ် ဖို့လို တယ်။ ဒီလို ဥပဒေနဲ့ အညီ မဟုတ်ဘဲ တဖက် သတ် ဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင် နေတာ ကြောင့် ကျနော် တို့ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ် ရခြင်း ဖြစ်တယ်” ဟု ရခိုင် လူမှု ကွန် ယက် အဖွဲ့ဝင် ကိုဇေ ယျကျော် က ဆိုသည်။
ဒုက္ခ သည် များ အတွက် ဆောက် လုပ်ပေး မည့် အိမ် များမှာ လုံးချင်း အိမ် များဖြစ် ကာ တူရကီနိုင် ငံမှ လှူဒါန်း ထားပြီး ပဋိ ပက္ခ ဖြစ်ပွားရာ မြို့နယ် များတွင် ဆောက်လုပ် သွားမည်ဟု သိရှိ ထား ရကြောင်း ကွန် ယက် ခေါင်း ဆောင် များက ပြော သည်။
ခွင့်ပြု ချက် မရဘဲ ဆန္ဒပြ သည့် အတွက် ရခိုင် လူမှု ကွန် ယက်မှ ခေါင်းဆောင် သုံး ဦးဖြစ်သော ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးသန်း လွင်စိုး နှင့် ဦးမင်း ထွန်းတို့အား သက်ဆိုင် ရာမှ အရေး ယူထား သည်။
“ညနေ ၃ နာရီလောက်မှာ ကျနော် တို့ အားလုံး ရုံးကို ရောက် တယ်။ မြို့နယ် ရဲတပ် ဖွဲ့မှူးက ဥပဒေ အရ အရေး ယူရ တာလို့ ပြော တယ်။ ကျနော် တို့ သုံးယောက်ကို အာမခံ နှစ်ယောက် စီနဲ့ ခံဝန် လုပ်ပြီးတော့ ညနေ ၄ နာရီကျော်လောက်မှာ ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်တယ်” ဟု ဦး စိုးဝင်း က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ကျနော် တို့က ဥပဒေနဲ့ အညီ လုပ်ချင် ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် လည်း ခွင့်ပြုချက် ရဖို့အတွက် အဆင့်ဆင့် တင်ပြခဲ့ တယ်။ ဒါပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာက အားလုံး ပယ်ချခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့တွေ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အ ညီ နောက် ဆုံးမှ ဒီလမ်း ကို ရွေးခဲ့ တာပါ။ ဥပဒေအရ အရေးယူထားတယ် ဆိုရင်လည်း ဥပဒေအရ ရင်ဆိုင်ရုံ ပဲပေါ့ဗျာ” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြော သည်။
ဆန္ဒပြ ခွင့်ကို မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ် ကို တင်ပြခဲ့ရာ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် မြို့ နယ်က ပလပ် ခဲ့သည်။ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်သို့ အယူခံရာတွင်လည်း မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်ရဲမှူး ကိုယ်စား ဒု-ရဲမှူးကြီး အောင်ကျော်ဦး လက်မှတ်ရေး ထိုး၍ ပလပ် ခဲ့သည် ဟု ဆိုသည်။
ထို့ပြင် မတ်လ ၇ ရက်နေ့မှစ၍ စစ်တွေ၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ ရသေ့တောင် မြို့နယ်များတွင်လည်း ဆန္ဒဖော် ထုတ်ပွဲများ ကျင်းပခဲ့ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်အရ ပြုလုပ်ခြင်း မဟုတ် ၍ ဆန္ဒပြပွဲများ၌ ဦးဆောင်ပါဝင်သူ အနည်း ဆုံး ၆ ဦးကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးများက အရေးယူ ထာရှိပြီး ၎င်းတို့ အား မခံဖြင့်ပြန် လွှတ်ပေး ထားကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေ ဆန္ဒပြ ပွဲကို စီစ ဉ် မှုဖြင့် ယာယီ ထိန်းသိမ်း ခံရရာ မှ အာမ ခံဖြင့် ပြန် လွတ် လာသူ စစ်တွေ လူမှု ကွန်ယက် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်ညိုအေး က “ဒီနေ့ အ ထိတော့ အာမ ခံနှင့် လွှတ်ပေး ထားတဲ့ ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင် တွေကို အာဏာ ပိုင် ဘက်က တယောက်မှ နောက်ထပ် ဆက်သွယ် တာမျိုး မရှိ သေးဘူး” ဟု ပြောပြ သည်။
အမျိုး သား ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်မှ တောင် ကုတ်မြို့ နယ် အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းအောင် ကလည်း ဆန္ဒဖော် ထုတ်ခြင်း မှာ ဖွဲ့စည်း ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရ နိုင်ငံသား တိုင်း ရပိုင် ခွင့်ရှိပြီး အစိုးရ အနေနှင့် ပွင့်လင်းမြင် သာမှု မရှိ ၍ ယခုလို ဆန္ဒပြ မှု များနှင့်ရင် ဆိုင်နေ ရကြောင်း ပြစ်တင် ဝေဖန် လိုက်သည်။
“ရခိုင်မှာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေကို ကြည့်ရင် အစိုးရရဲ့ ပွင့်လင်း မြင်သာ မှုနဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင် နေတယ်။ သမ္မ တ ဦးသိန်း စိန် က နိုင်ငံ သားဖြစ်မှု ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်မယ် ပြောတယ်။ လက်တွေ့ ဆောင်ရွက် တဲ့အခါ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု မရှိဘူး။ ဒီကြားထဲ အခု စစ်တွေမှာ လုံးချင်းအိမ် ၅၀၀၀ ဆောက် မယ် ဆို တာကို ဒေသခံ ရခိုင် လူမျိုးတွေ ဟာ သတင်း အရပဲ သိလာ ရတယ်။ အစိုး ရ ဆီက ဒီကနေ့ထိ မသိ ရသေးဘူး။ ဒါဟာ ပွင့်လင်းမြင် သာမှု မရှိ တာကို ပြနေ တာ။ ဒီလို ပွင့် လင်း မှု မရှိ လို့ ဆန္ဒပြ ပွဲတွေ ဖြစ်လာ ရတာပဲ”ဟု ဦးမင်းအောင် က ဆို သည်။
ဆန္ဒပြ ခွင့်နှင့် ပတ်သက် ၍ ပြည် နယ်နှင့် တိုင်း အလိုက်၊ တနေ ရာနှင့် တနေရာ ကျင့်သုံး ပုံချင်း မတူကြ သလို၊ ခွင့်ပြု ချက် ပေးခြင်း မပေးခြင်းမှာလည်း ဥပဒေအပေါ် မူမတည်ဘဲ အာဏာပိုင်များ အပေါ်၌သာ တည်နေသည်ဟု ၎င်းက ဝေ ဖန်ထောက်ပြ သည်။
ထို့အပြင် ရခိုင် ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ALD) အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူး ဦးမျိုးကျော် ကလည်း “နိုင်ငံ သား ဟုတ် မဟုတ် တောင် ကွဲကွဲပြားပြား မသိဘဲ ဘယ်လို လုပ်နေရာ ချမ လဲဗျာ။ ဒီကိစ္စ ALD က နဂို က ထဲက ပြောပြီး သား။ ဥပဒေ နဲ့ အညီ အမြန် စီ စစ်ပါ။ နိုင်ငံ သား ဖြစ်သင့် တဲ့ လူ ဖြစ် ရမယ်။ နိုင်ငံသား လက် မှတ် ရှိပြီး သား ဖြစ်ပေမယ့် မှန်မှန် ကန် ကန် ရထား တာ ဟုတ် မဟုတ် စီစစ် ဖို့ လို မယ်။ တကယ် လို့ မတော် မတရား နည်း နဲ့ နိုင်ငံသား လက်မှတ် ရထား တဲ့ သူတွေ ရှိရင် သူတို့ တွေကို နိုင်ငံသား မဟုတ် သူတွေနဲ့ အတူ Camp (ဒုက္ခ သည်စ ခန်း) မှာ ထားဖို့ ပြောခဲ့ တယ်။ ဒါဟာ ALD ရဲ့ မူပဲ” ဟု ဆို သည်။
ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်း ယမန်နှစ် ဇွန် လမှ စတင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သော ပဋိ ပက္ခ များကြောင့် အသက် အိုး အိမ် ဆုံးရှုံး ပျက်စီး ခဲ့ရပြီး အောက် တို ဘာနှင့် နိုဝင် ဘာလ များက ကမ္ဘာ့ အစ္စလာမ် ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ရေး အဖွဲ့ (OIC) ရုံး မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လာဖွင့် မှုအား ဆန့် ကျင် သည့် ဆန္ဒ ပြမှု များမှာ ရခိုင် ပြည်နယ် မှသည် အခြားမြို့ များ သို့ ပြန့် နှံ့ သွား ခဲ့ရပြီး နောက် ယခု ဆန္ဒ ပြမှု များမှာ ရခိုင်ဒေ သ၏ တ ကျော့ပြန် ဆန္ဒ ပြမှု များ ဖြစ် သည်။
News From: စစ်တွေ (မဇ္ဈိမ)
မလိုလားအပ်သော ပဋိပက္ခ အတားအဆီးမျိုးစုံသည် အသွင်ပေါင်းစုံဖြင့် နိုင်ငံတော် ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း လုပ်ဆောင်လျက် ရှိရာ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များတွင် ပါဝင်ခြင်း မပြုဘဲ အသိ၊ သတိဖြင့် တားဆီးရန် မေတ္တာရပ်ခံ
ဘာသာ ပေါင်းစုံ ချစ်ကြည် ညီညွတ် ရေး အဖွဲ့က မတ် ၂၀ ရက် တွင် မိတ္ထီ လာမြို့ ၌ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက် ၍ သဘော ထား ကြေညာ ချက် တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန် ကြေညာ လိုက်ကြောင်း သိ ရှိရ သည်။
ဘာသာ ပေါင်းစုံ ချစ်ကြည် ညီညွတ် ရေးအဖွဲ့
ပြည်ထောင်စု သမ္မ တမြန် မာ နိုင် ငံတော်
(ဘာသာ အသီးသီးမှ ဘာသာ ဝင်များသို့ မေတ္တာ ရပ်ခံခြင်းနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံမှ သာသနာ့ ခေါင်း ဆောင် များ၏
သဘော ထား ကြေ ညာ ချက်)
မန္တလေး တိုင်း ဒေသကြီး၊ မိတ္ထီ လာ မြို့ တွင် မတ်လ ၂၀ ရက် နေ့ က ဖြစ်ပွား ခဲ့သော အရောင်း အဝယ် အငြင်း ပွား မှုမှ အစပြု ကာ ဘာသာရေး အဓိ က ရုဏ်း အသွင် ကျယ်ပြန့် သွားသည့် အရေး ကိစ္စ အပေါ်၌ ဘာသာ ပေါင်းစုံ ချစ်ကြည် ညီညွတ် ရေး အဖွဲ့မှ သာ သနာ ခေါင်း ဆောင် များမှ ဆုံးရှုံး ထိခိုက် နစ်နာ သွားသူ များ အပေါ် များစွာ ထောက်ထား၊ စာနာ၊ ကရု ဏာ ထား၍ ဤ သဘော ထား ကြေညာ ချက်ကို အတူ တကွ ထုတ်ပြန် ကြေ ညာ အပ် ပါသည်။
၁။ ရှေး ဦးစွာ ဆရာတော်၊ သံဃာတော် အရှင် သူမြတ် များအား ယခုအခါ မိတ္ထီ လာမြို့တွင် ဘာသာရေး ပဋိ ပက္ခ အသွင် ဖြစ်နေသော အရေး ကိစ္စကို ပြေ လည် ပြေ ပျောက် ငြိမ်း ချမ်း သွား စေရန် မေတ္တာ ရှေ့ ထား၍ ကာကွယ် တားဆီး ပဲ့ပြင် ဆုံး မဩ ဝါဒများ ချီးမြှင့် ပေး ပါရန် ရိုသေ လေး စားစွာ လျှောက် ထား အပ် ပါသည် ဘုရား။ တပည့် တော်တို့ ဘက်၌ လည်း အမှား များ ရှိပါက ကျော သား ရင်သား မခွဲခြား ဘဲ ခွင့်လွှတ် ပေးတော် မူ ပါရန် ရိုသေ စွာဖြင့် လျှောက် ထား အပ် ပါသည် ဘုရား။
၂။ နိုင် ငံတော် အစိုး ရ အဖွဲ့ အစည်း များမှ လည်း လုံလောက် သော လုံခြုံ ရေး အစီ အစဉ် များ ချမှတ် ဆောင်ရွက် ပေးကြ ပါရန် နှင့် ဒုက္ခ ရောက် နေကြ သော နှစ် ဖက် ပြည် သူ များကို လုံခြုံ ရေး အကာ အကွယ် များ ဆောင်ရွက်​ ပေးကြ ပါရန်၊ ဥပဒေ ကြောင်းမှ လိုအပ် သလို စစ်ဆေး အရေး ယူ ဆောင် ရွက်ပေး ကြပါ ရန်နှင့် အဆိုပါ ကိစ္စ များကို ဆော လျင်စွာ ဆောင်ရွက် ပေး ကြ ပါရန် အထူး မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ် ပါသည်။
၃။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် အတွင်း နေထိုင်ကြ သော ဘာသာကြီး (၄)ပါး အပါ အဝင် ဘာသာ ဝင် အသီး သီးမှ မိမိတို့ ဘာသာဝင် အသီး သီးကို ဥပဒေနှင့် အညီ နေ ထိုင် ကြဖို့ ဆုံးမ စကား များကို ပြောကြား ပေးပါ ရန်၊ မေတ္တာကို အခြေ ခံ၍ ငြိမ်းချမ်း စွာ နေထိုင် ကြ ပါ ရန်နှင့် မလို လား အပ်သော ပဋိ ပက္ခ များတွင် ပါဝင် ပတ် သက်မှု မရှိရေး စောင့်ထိန်း ပေးကြ ပါရန် အထူး မေတ္တာ ရပ်ခံ အပ် ပါသည်။
၄။ သတင်း မီဒီ ယာများ၊ စာနယ် ဇင်း များမှ လည်း ပြည်သူ တို့ သိ သင့်သော မှန်ကန် သည့် သတင်း များ ကိုသာ ထုတ်ပြန် ပေးသ ကဲ့သို့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်စေ နိုင်သော ကော လာ ဟလ သတင်း များကို တားဆီး ပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံ ပါ သည်။
၅။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံ သည် ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်ခြင်း လမ်း ကြောင်း ပေါ်သို့ ရောက်ရှိ နေပြီ ဖြစ်ရာ မလို လား အပ် သော ပဋိပက္ခ အတား အဆီး မျိုး စုံသည် အသွင် ပေါင်း စုံဖြင့် နိုင်ငံတော် ပျက် စီးရာ ပျက်စီး ကြောင်း လုပ်ဆောင် လျက် ရှိရာ ပြည်သူ လူ ထု အနေ ဖြင့် ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ် များတွင် ပါဝင်ခြင်း မပြု ဘဲ ကောင်း စွာသော အသိ၊ သတိ များဖြင့် တားဆီး ကြဖို့ မေတ္တာ ရပ်ခံ ပါသည်။
ဦးရွှေ ဦးစိန်ဝင်းအောင် ဦးညွှန့်မောင်သျှိန် ဒေါက်တာသာဉာဏ်
(ဟိန္ဒူဘာသာ) (ဗုဒ္ဓဘာသာ) (အစ္စလာမ်ဘာသာ) (ခရစ်ယာန်ဘာသာ)
နာယက ဥက္ကဌ ဒုတိယဥက္ကဌ အတွင်းရေးမှူး
ရုရှ သူဌေးကြီး ဘာရာဇော့ဗ စကီး အိမ်မှာ သေဆုံးနေ
တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အေဗရာမိုဗစ်ခ်ျ နဲ့ ဘာရာဇော့ဗ်စကီး
ဗြိ တိန်မှာ နေထိုင် နေတဲ့ ရုရှ သူဌေးကြီး ဘာရာ ဇော့ဗ စကီး ကို လန်ဒန် က သူ့ နေအိမ် မှာ သေဆုံး နေတာ ကို တွေ့ ရှိ ရ ပါ တယ်။
အ သက် ၆၇ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဘာရီ ဇော့ဗ စကီး ဟာ ၁၉၉၀ နှစ် တွေ မှာ ဆိုဗီ ယက် ပြည်ထောင် စု ပြို ကွဲ တဲ့ ကာလ မှာ အလွန် အောင်မြင် ချမ်း သာ လာတဲ့ စီးပွား ရေး သမား ဖြစ် ပါ တယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ် ရုရှမှာ မစ္စတာ ပူတင် သမ္မတ ဖြစ်လာ ဖို့ ကူညီ ကြသူတွေ အထဲ သူ ပါ ဝင် ခဲ့ပြီး နောက် ပိုင်း မှာ တော့ သမ္မတ ပူတင် ကို အပြင်း အထန် ဝေဖန် ခဲ့သူ ဖြစ် ပါတယ်။
ရုရှ က Chechnya ကို စစ်ပြု တာ၊ လွတ် လပ် စွာ ပြော ဆို ခွင့် ကို ပိတ် ပင် တာတွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မ တ ပူတင် ကို သူ က ပေါ်ပေါ် ထင်ထင် ကို ထောက်ပြ ဆန့်ကျင် ပြော ဆို ခဲ့ပြီး နောက် ပိုင်း မှာတော့ နိုင်ငံတွင်း ကနေ သူ ထွက် ခွာ ခဲ့ပါ တယ်။
သူဟာ အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ကြံခံ ခဲ့ ရပြီး ဒီ လုပ်ကြံ မှု တွေ ကနေ လွတ်မြောက် လာ သူလည်း ဖြစ် ပါ တယ်။
အခု လောလောဆယ် ကာလ အတွင်း မှာ တော့ သူ့ ပြိုင် ဘက် ရှရှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင် ရိုမန် အီဗရာမိုဗခ်ျ နဲ့ ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ပေါင်း များစွာ တန်ဖိုး ရှိတဲ့ စီးပွားရေး ပိုင် ဆိုင်မှု တရား ရင် ဆိုင် ရာမှာ ရှုံး ခဲ့ပြီး အ ကြွေး အ များ အပြား တင် နေ တယ် ဆို တဲ့ သတင်း တွေ ထွက် ခဲ့ ပါတယ်။
News Form: BBC
မိတ္ထီလာ အကြမ်း ဖက် မှုကြောင့် အိုး အိမ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး ခဲ့ ရ တဲ့ ဒုက္ခ သည် တချို့။ (မတ်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၃)။
အဓိ ကရုန်းနဲ့ အကြမ်း ဖက် တာတွေ ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ မိတ္ထီ လာမှာ ဒီကနေ့ အခြေ အနေတွေ ပြန်ပြီးတော့ တည်ငြိမ် လာနေပြီ လို့ ဒေသခံတွေက ပြော ပါတယ်။ နှစ် ရက်ကြာဖြစ် ခဲ့တဲ့ ရုန်းရင်း ဆန်ခတ် မတည် မငြိမ် အခြေ အနေ တွေကြောင့် လူပေါင်း ၂၀,၀၀၀ လောက် အိုးအိမ် ပစ်ပြီး ဒုက္ခသည် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ မိတ္ထီ လာမြို့ နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ် စား လှယ်က ပြော ပါ တယ်။ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ က စပြီး အရေးပေါ် အခြေ အနေ ထုတ်ပြန်ကြေ ညာထားတဲ့ မိတ္တီ လာမြို့က နောက် ဆုံး အခြေ အနေ ကို ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း သတင်း ထောက် ကိုအောင် ရဲမောင်မောင်က သတင်း ပေးပို့ ထား ပါတယ်။
အရေးပေါ် အခြေ အနေ ကြေညာ လိုက်ပြီး တဲ့နောက် ပိုင်း လမ်းပေါ်မှာ အကြမ်း ဖက် ဆူပူ မှုတွေ ကို မတွေ့ ရတော့ ဘူးလို့ ဒေသခံ ပြည် သူတွေ က ပြော လာတာပါ။ အကြမ်း ဖက် ပဋိ ပ က္ခတွေ ဖြစ် ပွား ခဲ့ တာကြောင့် မိတ္တီ လာမြို့ မှာနေ ထိုင်ကြ တဲ့ လူပေါင်း ၂၀,၀၀၀ လောက် အိုးမဲ့ အိမ် မဲ့တွေ ဖြစ်ခဲ့ ရပြီး ဒုက္ခ သည်တွေ အဖြစ် နေထိုင်နေ ရ တယ် လို့ မိတ္ထီ လာမြို့က ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးဝင်း ထိန်က ပြော ပါတယ်။
“ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဒုက္ခ သည်တွေ က ဘုန်းကြီး ကျောင်းတွေ မှာနေ တာ အားလုံး ၇,၀၀၀ ကျော်လောက် ရှိ တယ်။ နောက် ပြီးတော့ မူ စလင် ဒုက္ခ သည်တွေ က ဘောလုံး ကွင်းမှာ ၉,၀၀၀ လောက် ရှိတယ်။ အမှတ် (၂)ရဲ စခန်းမှာ ၅,၀၀၀ လောက် ရှိတယ်။ အဲဒီ ကျောင်း တွေကို ဘုန်းကြီး ကျောင်းလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်း အလျောက်၊ မူ စလင် စခန်း တွေလည်း မူစ လင် စခန်းတွေ အလျောက် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ပေးတာ၊ အလား တူပဲ အခြား အဖွဲ့တွေ လာပြီးတော့ ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ပေးနေတာ ကျနော် တွေ့ပါတယ်။”
မိတ္ထီလာမြို့မှာ သွေးထွက်သံယို တိုက်ခိုက်မှုတွေ စတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကစလို့ ပုဒ်မ ၁၄၄ ညမထွက်ရ အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာ ၃ ရက် ကြာ လာ တဲ့ အချိန် အထိ အခြေ အနေတွေ တည်ငြိမ်မှု မရှိသေး တဲ့ အ တွက် အရေးပေါ် အခြေ အနေ အဖြစ် နိုင်ငံတော် သမ္မ တက မနေ့က လက်မှတ် ရေးထိုး ကြေ ညာလိုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အခု ထုတ်ပြန် လိုက်တဲ့ အမိန့် ကိုတော့ နောက် ဆက် တွဲ အမိန့် တ စုံ တရာ မ ထုတ်ပြန် မခြင်း ကျင့် သုံး သွား မှာဖြစ် သလို စစ်တပ် အကူ အညီ နဲ့ပါ လုံခြုံရေး ကို တာဝန်ယူ ကိုင် တွယ် သွားမှာ ဖြစ် တယ် လို့ သမ္မ တရဲ့ကြေ ညာ ချက်မှာ ဖော်ပြ ထား တာပါ။
အခု လို အရေးပေါ် အခြေ အနေ နဲ့ စစ် တပ်ရဲ့အကူ အညီ ရယူပြီး တဲ့နောက်မှာ လမ်းပေါ်မှာ ရဲနဲ့ စစ်သား တွေက လုံခြုံရေး အပြည့် အ၀ ရယူ ထားတယ် လို့ မိတ္ထီ လာမြို့ ခံ ကိုဖုန်း က ပြော ပါ တယ်။
စစ် တပ်နဲ့ ရဲတွေ လုံခြုံရေး ရယူ ထား တာကြောင့် အချို့ဈေး ဆိုင်တွေ ပြန်ဖွင့် လာနိုင်ပြီးတော့ ဒေသ တွင်းလည်း အတော်လေး တည်ငြိမ် လာပြီ လို့လည်း ဦးဝင်း ထိန် ကပြော ပါတယ်။
“မနေ့က ထက်စာ လို့ရှိရင် လုံခြုံရေး အခြေ အနေ တော်တော် ကောင်း သွားပြီ။ ကားတွေ အသွား အ လာရော၊ လူတွေ အသွား အလာရော ပုံမှန်ဖြစ် သွားပြီးတော့ ဈေး ဆိုင်တွေ လည်း နည်းနည်း ပြန်ဖွင့် လာတယ်။ မနေ့က ထက်စာ ရင်တော့ နည်းနည်း ပိုကောင်း တာပေါ့။ သို့သော် လည်းပဲ အခု ဟာက မူ စလင် ဒုက္ခသည်တွေ ကို အာဏာ ပိုင်တွေက သင့်လျော်တဲ့နေ ရာကို ပြောင်းကြ ရွှေ့ကြတဲ့ နေရာ မှာတော့ တချို့ ရပ်ကွက် တွေက လက် မခံဘူး ဆိုပြီး တင်း ခံနေတဲ့ အပိုင်း တွေတော့ ရှိ တယ်။ ဒါပေ မဲ့ ပဋိ ပက္ခသဘော မျိုးတော့ မဖြစ် ပါဘူး။”
မိတ္ထီ လာမြို့က အကြမ်း ဖက်လုပ် ရပ်တွေကြောင့် အိုးအိမ် စွန့်ခွာ ခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခ သည် တွေဟာ အကူ အညီ အတော် အတန် လိုအပ်နေ တယ် လို့လည်း မန္တလေးမြို့ က လာ ရောက်ပြီး ဒုက္ခ သည်တွေ ကိုကူ ညီနေ တဲ့ ကျောင်း သား ရဲဘော် ဟောင်းများ အဖွဲ့က ကိုဝင်းမြင့် ထွန်းက ဗွီအိုအေ ကို ပြော ပါတယ်။ အရေး ပေါ် အခြေ အနေ ထုတ် ထားပေ မဲ့ မိတ္တီ လာမြို့ကို လာရောက် ကူညီတဲ့ အခြား အရပ် ဒေ သ က လူတွေ အနေ နဲ့ ဒုက္ခ သည်တွေ ကို လွတ် လွတ် လပ် လပ် ကူညီ ပေးနိုင် တယ်လို့ ကိုဝင်းမြင့် ထွန်းက ပြော ပါတယ်။
“ရပါ တယ်ခင်ဗျ။ အခု ကတော့ ကျနော် တို့က မန္တလေး ကနေ သံဃာ အပါး ၅၂ ပါး လည်း ပါတာ ကိုးဗျ။ ကျနော် တို့ချည်း ပဲ မ ဟုတ် ဘူး။ သံဃာ အပါး ၅၂ပါး ဂဠုန်နီ ဆရာတော် အပါ အ၀င်ပေါ့။ ဒီ ဆရာတော် တွေရဲ့ ဦးဆောင် မှုနဲ့ ကျနော် တို့ သွား လာနေ တာပါ ပဲ။ ကျနော် တို့ အခု ဟာ ကတော့ ကျနော် တို့ သွားချင် တဲ့နေ ရာကို သွားလို့ရ ပါ တယ်။ ယူချင် တဲ့နေ ရာယူ လို့ ရ ပါ တယ်။”
မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာမှာ ဖော်ပြချက်အရ လူ ၁၁ ဦး သေဆုံးတယ်လို့ ဆိုထားပေမဲ့ အကြမ်း ဖက် မှု တွေကြောင့် အမှန် တကယ် လူ ၂၀ လောက် ထိ ဒီ ကာ လ တွင်း သေဆုံး သွား တယ်လို့ ဦးဝင်း ထိန်က ပြော ပါတယ်။ အစိုး ရရဲ့ သတင်း ထုတ်ပြန် ချက် တွေ အရ ဒဏ် ရာ ရတဲ့ လူပေါင်း ၃၉ ဦးနဲ့ ဘာ သာရေး အဆောက် အအုံ ၁၃ လုံး၊ နေအိမ် ၁၂၅ လုံးလောက် ပျက် စီး ခဲ့ တယ် လို့လည်း ဆို ထား ပါတယ်။
ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်း ရေး မှူး ချုပ်၏ အထူး ကိုယ်...
မိတ္ထီလာမြို့ရှိ မီးလောင်သွားသောအိမ်များ ပြန်ဆောက် ...
မိတ္ထီ လာမြို့ လယ်ဝေး မြို့နယ် ရုံးပင် ကျေး ရွာ ရမည...
မိတ္ထီလာနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ကိ...
မလိုလားအပ်သော ပဋိပက္ခ အတားအဆီးမျိုးစုံသည် အသွင်ပေါင...
မိတ္ထီလာအဓိကရုဏ်း လူပေါင်း ၂ သောင်းကျော်အိုးအိမ်မဲ့...